फेसबुक प्रकरण : राणा बदमास कि बस्नेत गुण्डा ? | TGuff
युथफोर्स अध्यक्ष महेस बस्नेतलाई गुण्डाको संज्ञा दिँदै फेसबुकबाट गाली गर्ने डीएसपी दीपसम्शेर राणालाई नेपाल प्रहरीले कारवाही गर्दै सरुवा गरिदिएको छ।
युथफोर्सले दुई साताअघि रत्नपार्कबाट निकालेको मसाल जुलुसमा बस्नेतले प्रहरी जवानमाथि मसाल झोसेको तस्वीर राख्दै राणाले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए। ‘यो महेस बस्नेत भनाउँदो राक्षसले मेरा केटाहरुलाई यस्तो गर्दा नि यिनै गुण्डाहरुलाई नेताको संरक्षण छ… थुक्क…!’ उनले फेसबुक स्ट्याटसबाट कडा आक्रोश पोखेका थिए।
अराजकताको रानोको छवि भएका बस्नेत र नेताहरूलाइ गाली गर्ने राणाको फेसबुक स्ट्याटसलाई समर्थन जनाउँदै सैयौं प्रहरी अधिकृतले लाइक हानेका थिए। फेसबुक नेटवर्कमा भएकामध्ये प्रहरी र सर्वसाधारणले हार्दिक समर्थन देखाउँदै राणाको स्ट्याटसको पक्षमा कमेन्ट लेखेका थिए। ‘अहिले राती आउने साले केपी ओलीको कार्यक्रमलाई बहिष्कार गरौं’, दीपक श्रेष्ठले बस्नेतका माउ नेतातर्फ संकेत गर्दै भने। जनजिब्रोको चलेका गालीका कडा शब्द लेख्दै ४ सय जति फेसबुक प्रयोगकर्ताले राणाको स्ट्याटस सेयर गरेपछि एमाले नेतृत्व पंक्ति झस्किएको थियो। त्यसपछि महेस बस्नेतले राणालाई सार्वजनिक रुपमा धम्की दिँदै सरुवाको लागि पहल थालेका थिए।
एमाले नेताहरुको चर्को दवाब झेल्न नसकेका आइजीपी रवीन्द्र प्रताव शाहले राणालाई सोमबार महानगरीय प्रहरी मुख्य घटना साहयता कार्यदलबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको ट्राफिक निर्देशनालयमा सरुवा गरेका छन् ।
बर्दी फुकालेर फिल्म खेल्न गए हुन्छ
युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेतले यो घटनापछि राणालाई सार्वजनिक रुपमै धम्की दिएका छन्। ‘पुलिस भएर धेरै हिरो हुने हैन, हिरो हुन मन् छ भने बर्दी फुकालेर फिल्म खेल्न गए हुन्छ’, युथफोर्स अध्यक्ष बस्नेतले एभिन्युज टिभीलाई अघिल्लो साता अन्तरवार्ता दिँदै भने– ‘बरु एउटी हिरोइन हामी पठाउँदिला।’
बस्नेतसँग नडराइ आवाज उठाउने डिएसपी दीपसमसेर राणा को हुन् त ? उनी हुन् पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपसम्शेर जबराका आफ्नै छोरा। महानगरीय प्ररहरी मुख्य घटना साहयता कार्यदलमा रहँदा उनको कल साइन KILLO 12 थियो। त्यही १२ किलोको नामले सेवामा खटिने समयमा उनले यस्तो स्ट्याटस राखेका थिए। बूढानिलकण्ठ र सेन्टजेभियर्स पढेका उनले १९९९ देखि इन्स्पेक्टरबाट नेपाल प्रहरीमा जागिर सुरू गरेका हुन्।
प्रहरीले यसो गर्न पाउने कि नपाउने ?
यो प्रकरणसँगै प्रहरीको मानवअधिकार प्रश्नलाइ चर्को रूपमा उठाइदिएको छ। प्रहरीले ड्युटीमा खटिँदा प्रदर्शनकारीको दुर्व्यवहार कतिसम्म सहने हो ? सेवामा खटिएको प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा निजी विचार राख्र पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँछ भने त्यसको लिमिटेशन कति हुने ? अर्कोतिर यो घटनाले इन्टरनेट कानुनलाइ पनि आकर्षित गरिदिएको छ। राणाले जुन तस्वीर राखेर महेस बस्नेतलाई गाली गरेका छन् त्यो आफैँमा प्राकृतिक हो वा हैन ? कम्प्युटर मिश्रणबाट तयार पारेको हो भने राणामाथि कानुनी कारवाही हुने कि नहुने ? हैन साँच्चै प्राकृतिक रुपमा बस्नेतले मसाल प्रहरीको टाउकोमा झोसिदिएका हुन् भने उनीमाथि मानवअधिकार हनन्‌को मुद्दा चलाइन प्रहरीलाइ कसले रोक्ने ?
बस्नेत भन्छन्– ‘कम्प्युटर मिश्रित तस्वीर प्रयोग गरी मेराविरुद्ध राणाले अभद्र काम गरेका हुन् ।’
राणाको फेसबुकबाट निकालिएको तस्विर हेर्नोस् जस्ताको तस्तै। सरूवाको लफडा सुरू भएपछि उनले स्ट्याटस तथा तस्विर डिलिट गरेका छन्।
राणाको फेसबुकबाट लिइएको तस्विर।
अनुसन्धान गरौं यो फोटो प्राकृतिक हो ? वा कम्प्युटर टिक्स गरी बनाइएको हो ?